Otu esi etinye GIMP na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
Otu esi etinye GIMP na Ubuntu 20.04
Sunday, October 31, 2021 Sunday, October 31, 2021 by Jọshụa James
Usoro 1. Wụnye GIMP na APT Manager
Usoro 2. Wụnye GIMP na Snapcraft (Snap)
Usoro 3. Wụnye GIMP na Flatpak
Otu esi ebido ngwa GIMP
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta wụnye ngwa GIMP na Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa site na iji ụzọ atọ ọzọ ị nwere ike ịhọrọ.
Nhọrọ nke mbụ bụ iji ebe nchekwa dabara adaba nke ebe nchekwa Ubuntu nyere. Nke a bụ ụdị kwụsiri ike yana echekwara.
sudo apt autoremove gimp --purge
Nhọrọ nke abụọ bụ ịwụnye GIMP na Snap. Site na ndabara, ekwesịrị ịwụnye njikwa ngwugwu Snapcraft na desktọpụ Ubuntu gị ọ gwụla ma i wepụrụ ya na mbụ.
Maka ndị ọrụ wepụrụ snapd, megharịa iwu a:
arụnyere snap? Mafere ahịrị ole na ole ndị a wee gaa n'ihu ozugbo na ntinye GIMP na Snap
Ozugbo etinyere ya, ị ga-achọ ịmalitegharị ọrụ GDM3 iji wepụ gị na nnọkọ gị ugbu a.
Wụnye isi faịlụ ka ịzenarị esemokwu:
Na-esote, tinye iwu snap a ka ịwụnye onye ahịa GIMP:
Nhọrọ nke atọ bụ iji njikwa ngwugwu Flatpak. Site na ndabara, ejighi sistemụ arụmọrụ Ubuntu arụnye Flatpak. Nke a bụ nhọrọ ọzọ ewu ewu nke yiri Snap nke nwere ike mara ndị ọrụ sitere na sistemụ arụmọrụ na-abụghị Debian/Ubuntu.
Na-esote, ịkwesịrị ịme ka Flatpack maka Ubuntu jiri iwu na-esonụ na njedebe gị:
Ugbu a tinye GIMP site na iji iwu flatpak:
Ileghara nke dị n'elu anya ma ọ bụrụ na akara ngosi GIMP dị. Agbanyeghị, mgbe ụfọdụ ahụhụ a nwere ike ime mgbe ị na-etinye ngwugwu ọhụrụ.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ iwepu ụdị Flatpack nke GIMP, gbaa iwu a:
sudo flatpak uninstall --delete-data org.gimp.GIMP
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ma jiri ọnụ, zipu usoro a na ndabere:
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ a na desktọpụ gị mepee ụzọ ahụ: Ihe omume > Gosi ngwa > Mmemme GNU Image Manipulation. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi etinye ngwa GIMP gọọmentị na desktọpụ Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa gị n'ụzọ abụọ dị iche iche.
Categories Ubuntu Tags Gimp, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo
Etu esi etinye Skype na Ubuntu 20.04
Otu esi edozi ma hazie UFW Firewall na Ubuntu 20.04